KEDU ESI JIKỌỌ SAMSUNG SMART TV NA ỊNTANETỊ SITE NA WI-FI? - AZỊZA AJỤJỤ - 2019
N'afọ ndị na-adịbeghị anya, mmepe nke nkà na ụzụ na-aga n'ihu ọsọ ọsọ dị otú ahụ na ihe yiri ka ụnyaahụ ka ọ bụrụ akụkọ ifo bụ taa! M na-ekwu nke a n'eziokwu na taa, ọbụna na-enweghị kọmputa, ị nwere ike ịgagharị na ibe Intanet, lee vidiyo na youtube ma mee ihe ndị ọzọ na Intanet site na iji TV!
Ma maka nke a, n'ezie, ọ ghaghị ijikọ na Ịntanetị. N'isiokwu a, m ga-achọ ịnọ na-ewu ewu, na-adịbeghị anya, Samsung Smart TV, iji tụlee ịmepụta Smart TV + Wi-Fi (ọrụ dị otú ahụ na ụlọ ahịa, n'ụzọ, ọ bụghị ọnụ ala) site na nzọụkwụ, iji dozie nsogbu kachasị.
1. Gịnị ka a ga-eme tupu ịmepụta TV?
2. Ịmepụta Samsung Smart TV maka ịbanye na Ịntanetị site na Wi-Fi
3. Gịnị ka m kwesịrị ime ma ọ bụrụ na TV adịghị ejikọta na Ịntanetị?
N'isiokwu a, dịka e kwuru na ole na ole n'elu, m ga-atụle ihe metụtara nanị TV na Wi-Fi. N'ikpeazụ, ị nwere ike, jikọọ TV na USB na router, ma na nke a, ị ga-ewepụ eriri USB, ụyọkọ wiwi n'okpuru ụkwụ gị, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwagharị TV - gbakwunyekwuo nsogbu.
Ọtụtụ ndị kwenyere na Wi-Fi enweghị ike ịnye njikọ mgbe niile, mgbe ụfọdụ, ọgbụgba ahụ agbajiri, wdg. N'eziokwu, ọ na-adabere na rediregharị gị. Ọ bụrụ na onye rawụta dị mma nakwa na ọ dịghị agbaji njikọ mgbe ị na-ebugharị (site na ụzọ, njikọ ejirila rụọ ọrụ dị elu, ọtụtụ mgbe, ndị na-agagharị agagharị na-arụ ọrụ na-adịghị ike) + ị nwere Internet dị mma na ngwa ngwa (na obodo ukwu ugbu a, ọ dịghị nsogbu ọ bụla) - mgbe ahụ njikọ ị ga - abụ ihe dị gị mkpa, ọ dịghịkwa ihe ga - akwụsị. Site n'ụzọ, banyere nhọrọ nke onye rawụta - e nwere isiokwu dị iche.
Tupu ịmalite ịmepụta TV ozugbo, ịkwesịrị ime nke a.
1) I kpebie ma ụdị TV gị nwere nkwụnye Wi-Fi jikọtara. Ọ bụrụ na ọ bụ - nke ọma, ọ bụrụ na ọ bụghị - mgbe ahụ ị jikọọ na Ịntanetị, ịkwesịrị ịzụta eriri wi-fi nke jikọtara site na USB.
Ntị! Ọ dị iche maka ụdị TV ọ bụla, ya mere kpachara anya mgbe ị na-azụ.
Njikere maka ijikọ site wi-fi.
2) Ihe nke abụọ dị mkpa ga-abụ - ịmepụta redire (Ọ bụrụ na ngwaọrụ gị (dịka ọmụmaatụ, ekwentị, mbadamba ma ọ bụ laptọọpụ), nke jikọọkwara na Wi-Fi na onye ntanetị - enwere Intanet - ọ pụtara na ihe niile dị n'usoro. Nke a bụ isiokwu buru ibu ma dị oke ntanetị, karịsịa ebe ọ bụ na ọ gaghị adaba na usoro nke otu akwụkwọ. N'ebe a, m ga-enye naanị njikọ na ntọala nke ụdị ejiji: ASUS, D-Link, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, NETGEAR.
Mgbe mgbe ị na-amalite TV, ọ na-enye aka na-eme ka ọnọdụ ahụ. O yikarịrị ka ọ dịla anya na ịchọrọ ihe a, n'ihi na O yikarịrị ka TV ọ dị na oge mbụ gbanwere na ụlọ ahịa, ma ọ bụ ọbụna n'ụdị ngwaahịa ọ bụla ...
Site n'ụzọ, ọ bụrụ na eriri (ejiri eriri) ejikọtaghị TV, dịka ọmụmaatụ, site na otu onye na-ahụ maka router - site na ndabara, mgbe ị na-ahazi netwọk ahụ, ọ ga-amalite na-achọ njikọ nke ikuku.
Tụlee ozugbo usoro nke ịmepụta nzọụkwụ site na nkwụsị.
1) Nke mbụ gaa na ntọala ma gaa na "netwọk" taabụ, anyị nwere mmasị na - "ntọala netwọk". Na ime, site n'ụzọ, enwere "bọtịnụ" bọtịnụ pụrụ iche (ma ọ bụ ntọala).
2) Site na ụzọ, e nwere ihe mgbaàmà na nri nke a na-eji ahazi njikọ netwọk na iji ọrụ Ịntanetị dị iche iche.
3) Ọzọ, a ga-egosi ihuenyo "gbara ọchịchịrị" na aro ka ịmalite nụgharị. Pịa bọtịnụ "mmalite".
4) Na nke a, TV na-ajụ anyị ka anyị gosi ụdị ụdị njikọ iji: USB ma ọ bụ njikọ Wi-Fi wireless. N'ọnọdụ anyị, họrọ igwe ikuku wee pịa "ọzọ."
5) Sekọnd 10-15 TV ga - achọ netwọk ikuku niile, n'etiti nke kwesịrị ịbụ nke gị. Site n'ụzọ, biko rịba ama na ebe ọchụchọ ga-adị 2.4Hz, yana aha netwọk (SSID) - onye ị kwuru na ntọala nke router.
6) N'ezie, a ga-enwe ọtụtụ netwọk Wi-Fi n'otu oge, ebe ọ bụ n'obodo ukwu, na-emekarị, ụfọdụ ndị agbata obi nwekwara ndị na-eme njem na-arụ ọrụ ma nyefee ha. N'ebe a, ị ga-ahọrọ netwọk ikuku gị. Ọ bụrụ na netwọk ikuku gị na-echedo paswọọdụ, ị ga-achọ itinye ya.
Ọtụtụ mgbe, mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-ejikọta njikọ Ịntanetị na-akpaghị aka.
Ọzọ ị ga-aga "menu - >> nkwado - >> Smart Hub". Smart Hub bụ ihe pụrụ iche na Samsung Smart TV nke na-enye gị ohere ịnweta isi mmalite nke ozi na Ịntanetị. Ị nwere ike ịlele ibe weebụ ma ọ bụ vidiyo na youtube.
N'ozuzu, n'ezie, ihe kpatara TV ejighi njikọ na Ịntanet nwere ike ịbụ ọtụtụ. Ọtụtụ mgbe, n'ezie, nke a bụ ntọala na-adịghị mma nke router. Ọ bụrụ na ngwaọrụ ndị ọzọ na-abụghị TV nwekwara ike ịnweta Ịntanetị (dịka ọmụmaatụ, laptọọpụ), ọ pụtara na ị ghaghị igwu na ntụziaka nke router. Ọ bụrụ na ngwaọrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ, ma TV adịghị, gbalịa tụlee n'okpuru ọtụtụ ihe.
1) Nke mbụ, gbalịa ịtọ TV mgbe ị na-ejikọta na netwọk ikuku, setịpụ ntọala ọ bụghị na-akpaghị aka, mana aka. Nke mbụ, gaa na ntọala nke onye ntanetị ma gbanyụọ nhọrọ DHCP maka oge ahụ (Dynamic Host Configuration Protocol).
Mgbe ahụ, ịkwesịrị ịbanye na ntọala netwọk nke TV ma nye ya adreesị IP ma dee ọnụ ụzọ (ọnụ ụzọ ámá IP bụ adreesị ị banyere na ntọala redio, ọtụtụ mgbe 192.168.1.1 (ma e wezụga ndị njem TRENDnet, ha nwere adreesị IP adreesị 192.168. 10.1)).
Dịka ọmụmaatụ, anyị na-agbanye ntọala ndị a:
Adreesị IP: 192.168.1.102 (ebe ị nwere ike ịdee adreesị IP mpaghara, dịka ọmụmaatụ, 192.168.1.103 ma ọ bụ 192.168.1.105. Site n'ụzọ, na TRENDnet routers, ọ ga-abụrịrị na adreesị a ga-akọwapụta ya dị ka ndị a: 192.168.10.102).
Ihe nchịkọta Subnet: 255.255.255.0
Ọnụ ụzọ ámá: 192.168.1.1 (TRENDnet -192.168.10.1)
Ntọala DNS: 192.168.1.1
Dịka iwu, mgbe iwebata ntọala ahụ na akwụkwọ ntuziaka - TV na-etinye aka na netwọk ikuku ma nweta ohere Ịntanetị.
2) Nke abuo, mgbe ịmechara usoro nke iji aka na-ekenye otu adreesị IP kpọmkwem na TV, ana m akwado itinye ntọala onye na-ahụ maka redio ọzọ ma tinye adreesị MAC nke TV na ngwaọrụ ndị ọzọ n'ime ntọala - ka oge ọbụla ị jikọọ na netwọk ikuku, a na-enye ngwaọrụ ọ bụla adreesị IP adighi Banyere ịmepụta ụdị ndị na-eme njem - ebe a.
3) Mgbe ụfọdụ, ọ dị mfe ịmaliteghachi nke redio na TV. Gbanyụọ ha maka otu nkeji ma ọ bụ abụọ, wee tụgharịa ha ma megharịa usoro nhazi ahụ.
4) Ọ bụrụ na mgbe ị na-ele vidio Ịntanetị, dịka ọmụmaatụ, vidiyo site na youtube, playback bụ "twitching" mgbe niile: vidiyo ahụ na-akwụsị, mgbe ahụ ọ na-ebu ibu - o yikarịrị ka ọ gaghị adị ọsọ. Enwere ọtụtụ ihe kpatara: ma onye rawụta ahụ adịghị ike ma na-agba ọsọ ọsọ (ịnwere ike iji ya dị ike karịa ya), ma ọ bụ na ngwaọrụ Ịntanetị jikwa ngwaọrụ ọzọ (laptọọpụ, kọmputa, wdg), ọ nwere ike ịbawanye ngwa ngwa site n'Ịntanet gị.
5) Ọ bụrụ na onye na-ahụ maka redio na TV dị n'ime ụlọ dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, n'azụ mgbidi atọ nwere ike, ikekwe njikọ nke ya ga-aka njọ n'ihi ihe ọsọ ahụ ga-ebelata ma ọ bụ njikọ ga-agbaji oge. O b ur u ot 'u ah u, gbal ia idowe onye na-ak omputa na TV na ibe gi.
6) Ọ bụrụ na e nwere bọtịnụ WPS na TV na rawụta, ịnwere ike ịnwale ijikọ ngwaọrụ na ọnọdụ akpaka. Iji mee nke a, jide bọtịnụ na otu ngwaọrụ maka 10-15 sekọnd. na nke ọzọ. Ọtụtụ mgbe, ngwaọrụ ngwa ngwa ma jikọọ na-akpaghị aka.
Nke ahụ niile. Ihe njikọ niile nke ọma ...